Echiche YouTube efu | Mmasị YouTube | Comments YouTube efu
Nlele YouTube efu | Mmasị YouTube efu
Ndị debanyere aha YouTube n'efu | Comments YouTube efu
#1 ikpo okwu ntinye aka YouTube iji nweta echiche YouTube, mmasị, nkwupụta na ndị debanyere aha n'efu site na ezigbo ndị mmadụ!
Kedu ka ọ si arụ ọrụ? Nweta mkpụrụ ego site na itinye aka na ọwa ndị otu ndị ọzọ. Mgbe ahụ, bubata vidiyo gị n'ime GoViral, họrọ ọrụ ịchọrọ ịnata na n'ime nkeji, ị ga-amalite ịnata echiche, nkwupụta mmasị na ndị debanyere aha n'aka ndị mmadụ n'efu!
Nweta uto YouTube efu ugbu a! or Zụrụ ndị debanyere aha YouTube
Elele nke iji GoViral kwa ubochi
N'ezie Free Iji!
Nweta ọrụ nlekọta adịchaghị n'efu yana nhọrọ iji kwalite ụgwọ.
Na-enye gị Echiche Efu, Mmasị, Ndị debanyere aha na Nkwupụta
Netwọk anyị na-enye gị ohere ịnweta ngwa ngwa na ngwa ngwa ị nweta ndị debanyere aha, echiche, mmasị na nkọwa. Ihe niile ị chọrọ!
YouTube na-akpaghị aka
Tinye vidiyo gị na ntanetị anyị ma tinye ọnụọgụ nke ọrụ ọ bụla ịchọrọ ịnata. Mgbe ahụ, pụọ ma hapụ ka netwọkụ anyị na-enyefe gị ihe niile na akpaghị aka.
Mee ka Ọganihu Organic dịkwuo mma
Inweta ndị debanyere aha, echiche, mmasị na okwu na-enyere aka ịbawanye ogo ọchụchọ gị, nke na-enyere aka ịbawanye ụba na njikọ aka gị.
Na-azọpụta Gị Oge
Lekwasị anya na ọdịnaya gị na agụụ gị mgbe netwọkụ anyị na-enyefe aka na ọwa na vidiyo gị.
Super Easy Iji Jiri
Anyị interface bụ ọrụ enyi na enyi na nkọwa. Banye, bubata vidiyo gị, họrọ ọnụọgụ nke ndị debanyere aha, echiche, amasị na ihe ị ga-enweta ma ịmechaa!
Debanye aha akaụntụ gị n'efu
Nweta mkpụrụ ego site na ikiri vidiyo na isoro ha.
Na-emefu ego gị
Na-emefu ego gị iji nweta echiche efu, amasị, ndị debanyere aha na nkwupụta.
Nọdụ ala ka ị na-anata ndị debanyere aha, echiche, amasị na nkọwa!
Ọ na-enyere m aka ịkwalite ọwa m…
Nke a bụ agbamume anyị chọrọ iji mee ka ihu akwụkwọ anyị pụta ìhè ozugbo!
Lee nnukwu ọrụ!
Daalụ nke ukwuu ụmụ okorobịa maka oké ọrụ! GoViral bụ ihe kachasị mma APP!
Ebee ka ị nọ kemgbe afọ ole na ole gara aga?
Nweta Echiche YouTube na-akwụghị ụgwọ ma nweta azụmaahịa bara uru bara uru na azụmaahịa YouTube
You na - achọ itolite azụmaahịa gị ma bulie uru azụmaahịa gị? Ikwesiri iji ahia ahia vidiyo. Enweghị usoro ịzụ ahịa azụmaahịa nke oge a zuru oke taa na-enweghị atụmatụ maka ire vidiyo. Ka emechara, mgbe ọ na-abịa ahịa ọdịnaya, vidiyo na-edebanye aha ROI kachasị elu. N'agbanyeghị ihe mgbaru ọsọ gị doro anya n'azụ itinye aka na ahịa vidiyo, mmega ahụ ga-eweta.
A maara ahia ahia vidiyo nke ọma na ahịa azụmaahịa maka ikike ọ nwere iji chụpụ ndị ahịa yana ịkọwapụta azụmaahịa gị. Y’oburu n’inweghi ahia vidiyo n’ime atumatu ahia gi, oge eruola mgbe imere ya. Ire ahia vidio ga - eme ka elu di elu n’ọdị nso ma mee ka ị nweta ọtụtụ uru ahịa maka azụmaahịa gị.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ YouTube maka ịnabata ọdịnaya vidiyo azụmaahịa gị
Anyị enweghị ike ikwu maka vidiyo dị n'ịntanetị ma ekwughi YouTube. The video hosting na nkekọrịta website aghọwo synonymous na online video ọdịnaya. N'ezie, imirikiti ndị mmadụ amaghị, mana YouTube bụrụ ụlọ ọrụ nyocha kacha ewu ewu n'ụwa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị nwere ndị na-ege ntị dị njikere na weebụsaịtị, na ibugo ọdịnaya vidiyo vidiyo na YouTube na-enyere gị aka ịkwado ọkwa dị elu karịa SEO. Inweta echiche YouTube na ọwa azụmaahịa YouTube gị nwere ike inyere gị aka ịme nhụba ama nke ika gị ma melite iru ya. Yabụ, gịnị kpatara ị ga - eji họrọ ebe nrụọrụ weebụ nnabata vidiyo ọ bụla ka ị bulite ọdịnaya vidiyo vidiyo gị?
Uru data akwadoro nke ahịa YouTube
N'akụkụ a, anyị na-eleba anya na uru niile ị na-enweta mgbe ịhọrọ YouTube dị ka ikpo okwu kachasị amasị gị maka ịkekọrịta vidiyo maka ịzụ ahịa azụmahịa gị:
Nkwenye ekwenyeghi - YouTube bụ eze nke ọrụ vidiyo niile na-ekere òkè na ntanetị. Ndị ọrụ site na afọ 15-55 na-enweta ikpo okwu mgbe niile. Ọ dị mma ikwu na vidiyo nwere ike inyere gị aka ịchọta. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ vidio vidio na weebụsaịtị ahụ, ọ dịkwa mkpa ka ị nwee ike ịme nka kacha mma kacha mma iji hụ na ha anaghị efu n'oké osimiri nke ọtụtụ vidiyo ndị ọbịa nọrọ na ya. Viewschọpụta echiche maka ọdịnaya vidiyo gị nwere ike ịbụ ọrụ siri ike. Maka nke a, ọ bụrụ n’ịchọta ụzọ iji nweta free YouTube ngosi n'ihi na azụmahịa gị ọwa YouTube, ị kwesịrị ị na ijide ya ngwa ngwa.
Nnukwu okporo ụzọ - YouTube na-edebanye aha ndị ọrụ dị elu ụbọchị niile. Onu ogugu mmadu ruru nde ijeri na-elele ihe karịrị otu ijeri vidiyo nke vidio na magnate web hosting. Ọrụ nnabata vidiyo a na - akwụghị ụgwọ nwere ike iru igwe mmadụ karịa karịa igwe onyonyo. Ọ na-enye azụmaahịa nwere atụmatụ mgbasa ozi dị ọnụ ala maka vidiyo vidiyo ha na-emepụta. Ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi, gị onwe gị kwa nwere ike ịkwado ọtụtụ ijeri echiche na ọdịnaya vidiyo ahịa gị, na-ekwe nkwa iyi nke azụmaahịa na-abata maka akara gị.
Ike maka ịrịa ọrịa - YouTube na-enye ndi ahia ulo oru ndi nwere otutu ikike ime ka ihe vidio vidio ha bu ihe ojoo. Can nwere ike itinye ọdịnaya vidiyo gị n'ọtụtụ nkwukọrịta ahịa ndị ọzọ, dịka ịgwakọta ya na post blọgụ gị ma ọ bụ ịkekọrịta njikọ ya na mkparịta ụka mkparịta ụka LinkedIn.
Mma SEO - Kemgbe Google nwetara YouTube, injin nchọ ahụ na-ejikọ weebụsaịtị yana vidiyo vidiyo YouTube dị elu na igwe ọchụchọ ya. Yabụ, ọ bụghị naanị iwulite atụmatụ vidio vidiyo gị na YouTube na - enyere gị aka imeri echiche ndị na - erite uru na ahịa gị na YouTube, mana ọ na - eritekwa uru mbọ ị na - agba n’ahịa dijitalụ Mgbe emeziri SEO ogo maka websaịtị azụmaahịa gị, akara web gị na - edebanye aha na - akpaghị aka.
Mwebata dị mfe na mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta - Onweghị ihe na - arụ ọrụ nke ọma maka azụmaahịa mgbasa ozi mmekọrịta karịa ọdịnaya vidiyo nwere ike ịkekọrịta. Mgbe ị mepụtara vidiyo ahịa dị elu maka azụmahịa gị na YouTube, ị na-enwe obi ụtọ mgbanwe nke ịkekọrịta ya na ibe mgbasa ozi gị. Ọtụtụ mmadụ nwere ike ịlele vidiyo na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta na-egosi na ntanetịime akụkọ ha karịa ịchọ ọwa azụmahịa gị. Ọ bụrụ na ha achọpụta na ọdịnaya vidiyo gị dị mma na mgbasa ozi mgbasa ozi, ha ga-eso ndị enyi ha na ndị enyi ha kerịta ya site na njikwa mmekọrịta ha na-elekọta mmadụ. YouTube, mgbe ahụ, na-enye gị ohere ijikọ uru nke ahịa vidiyo na mgbasa ozi mgbasa ozi na otu usoro nsonaazụ ahịa dị elu.
Nweta mba nile - YouTube na-ewu ewu n'ụwa niile. Ọ na-arụ ọrụ na mba 88 ma nye ya n'asụsụ 76 dị iche iche. Enweghị ọrụ nnabata web vidiyo ọzọ nwere ike ịgbatị vidiyo azụmaahịa azụmahịa gị zuru ụwa ọnụ na YouTube nwere ike. Mgbe inwetara echiche YouTube na - enweghị ihe ịga nke ọma ma bulie elele anya nke ọma maka vidiyo azụmaahịa gị na YouTube, ị na - enye ya nkwado mmekọrịta ọha na eze. Ndị na-ege ntị na-anabata vidiyo nwere ọnụ ọgụgụ dị elu karịa ka ha na-ele vidio nke yiri ka ọ bụ mmadụ ole na ole na-ele ya anya.
Otu esi amalite na ahia YouTube
Ugbu a ị dịla njikere ịbanye na ahịa YouTube, anyị chere na ị nwere ike iji ntuziaka ka esi ebido. Ahịa YouTube nwere ike iyi ihe na-agwụ ike maka ndị mbido na-ejighị ọrụ nnabata vidiyo na ọrụ ịkekọrịta dịka ngwa ahịa. Irè YouTube dị irè gụnyere ọrụ ole na ole chọrọ nlebara anya na nlekọta gị. Ikwesiri ịma otu esi emepụta ọwa YouTube maka nsonaazụ kacha mma ma bulie vidiyo ị mepụtara na YouTube iji bulie elu na ntanetị ọchụchọ na ntanetị. Ikwesiri ighota otu esi ejikwa ma jikwaa mgbasa ozi mgbasa ozi YouTube, yana nyochaa usoro ihe nlere nke vidio YouTube nyere.
N'okpuru, anyị na-ekenye ndị na-egosi etu ị ga - esi bido njem njem vidiyo vidiyo gị nke ọma iji rite uru azụmaahịa gị.
Mepụta ma na-arụ ọrụ ọwa YouTube
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta ezigbo elele sitere na azụmaahịa azụmaahịa YouTube gị, họrọ maka Akaụntụ Akaụntụ na Google iji banye maka YouTube karịa iji akaụntụ nkeonwe gị. Akaụntụ Akaụntụ ga-enyere ọtụtụ mmadụ aka ịbanye na akaụntụ YouTube gị, ma ọ bụghị naanị onye kere ya. Ọ bụrụ na ị jiri akaụntụ Google gị, aha njirimara YouTube akaụntụ gị ga-abụ nke ị kọwaararịrị onwe gị na Google. Creatmepụta na ijikwa ọtụtụ ọwa YouTube n'otu oge na-aghọ ahụmịhe na-enweghị ntụpọ na Akaụntụ Ahịa, nke ị ga-erite uru ka azụmahịa gị na-eto.
Ikike okike imeputa ihe omuma enweghi ike ime ma oburu na enweghi nyocha zuru oke. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka vidiyo YouTube gị rụọ ọrụ nke ọma, mụta ntakịrị ihe gbasara ọnọdụ igwe mmadụ ibe gị na YouTube na-ege ntị. Omenala olee nke ọtụtụ n'ime ha si, kedu afọ ole ha dị, oleekwa otu ha si ahọrọ iri ọdịnaya gị? Yourselfmata onwe gị na ozi a ga - enyere gị aka ịmepụta ọdịnaya ahịa vidiyo vidiyo ezubere iche dị elu. Y’oburu na ebiela ihe obula n’ime vidio vidio na onodu gi nke YT, inwere ike iji web saiti websaiti imuta ihe ndi mmadu na-ege gi nti. Chọọ maka ndị na-eso ụzọ gị na ndị na-eso ụzọ gị na ibe mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ. Okwesiri inyere gi aka imeputa ihe omuma ahia gi.
Tụlee ma nyochaa arụmọrụ nke akara gị na YouTube na nke ndị na-asọmpi gị. Lelee echiche dị na vidiyo ha na ọnụọgụ nke ndị debanyere aha na ọwa ha. Nwere ike ịtọ ntọala maka arụmọrụ nke vidiyo vidiyo gị na ya. Nwekwara ike ịchọ ịchọpụta isiokwu ndị ha ji mee ihe na nkọwa ọdịnaya ha nyere maka mmụọ nsọ iji rụọ vidiyo gị. Nke ahụ kwuru, bụrụ nke mbụ na ụzọ gị. Idebe taabụ na vidiyo na-ewu ewu na YouTube bụkwa ezigbo omume, nke ga - enyere gị aka ịchịkọta ndụmọdụ na aghụghọ maka ịmepụta ọdịnaya vidiyo dị elu.
Na-achọpụta ọdịnaya vidiyo vidiyo maka nsonaazụ kacha mma
YouTube bu ihe nlere vidiyo nke na etinye onodu ya n’adabere na isi okwu, aha, nkowa, na ihe ndi ozo, dika ihe ozo. Ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta ọdịnaya vidiyo gị YouTube ka ọ dị mfe ma nweta echiche YouTube n'efu na ndabara, ị ga-achọ ịkwalite vidiyo ị mepụtara maka ọrụ nnabata. Nkwado YouTube na algorithm na-egosi vidiyo maka ndị na-ege ntị dabere na mmasị ha na-ele. Nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị elu maka vidiyo ndị ị mepụtara site na ị na-eme nyocha isiokwu dị na YT na ịmepụta ọdịnaya vidiyo metụtara ya maka isiokwu ndị na-arụ ọrụ dị elu. Ihe ikwesiri ime bu -
Bịa na aha siri ike na isiokwu dị mkpa nke YouTube algorithm ga-anabata ngwa ngwa. Gbalịa ịghara ịbụ spammy ma ọ bụ soro ụdị ịde pịa-bait; ọ ga-abụrịrị na ọ ga - eduga SEO adịghị mma maka vidiyo YouTube gị.
Hazie vidiyo vidiyo gị. Ihe ntanetịime vidio gị bụ otu n’ime ihe izizi ndị na - ege ntị na - ahụ maka vidiyo vidio gị. Ihe nlere anya na-adọrọ adọrọ ga-agba ndị mmadụ ume ka ị pịa ma kpọọ ọdịnaya vidiyo vidio gị. Mee thumbnail a dị ka mkpebi dị elu dị ka o kwere mee maka nsonaazụ kacha mma.
Dee nkọwa vidiyo doro anya ma dị nkenke. O yikarịrị ka ndị mmadụ ga-egwu vidio ma lelee ya ruo ọgwụgwụ ma ọ bụrụ na ha achọpụta na isiokwu nke vidiyo ahụ masịrị ha. Nkọwa vidiyo bara ọgaranya maka vidiyo gị ga-eme ka vidiyo gị dịkwuo mma maka ndị na-ekiri ma nyere aka idowe ha site na oge.
Gụnye CTA n'ụdị kaadị, akara mmiri, na mgbasa ozi na-erughi eru. Chọrọ ka ndị na-ege gị ntị vidiyo vidiyo YouTube gị mee ihe maka azụmahịa gị. Ttinye ihe ndị a n'ụzọ dị nro na ọdịnaya vidiyo azụmaahịa gị nke YouTube nwere ike inye ndị na-ege gị ntị vidiyo ihe ha chọrọ iji tinye ụlọ ọrụ azụmaahịa gị.
Gbaa ndị na-ege gị ntị ka ha masị vidio gị, kekọrịta, ma denye aha gị. Ọ na-eme njikọ aka ma na-emetụta ọkwa gị na YouTube algorithm nke ọma.
Usoro ahia ọdịnaya dị oke egwu nke dị na YouTube bụ nke na-enyocha onwe ya oge niile ma weghachite onwe ya iji mee ka ọ kwekọọ na mkpa na agụụ ndị na-ege ntị. Ọ na-esokwa na usoro ahịa ọhụụ. Mgbe ị mepụtara ọwa YouTube maka azụmahịa gị, ị ga-eme nke ọma ịdebe ma soro usoro mbipụta vidiyo iji hazie mbọ ịre ahịa vidiyo gị.
Nwekwara ike ịchọrọ ime ka ọdịnaya gị pụta ìhè site na ịtinye ha nkọwapụta, ịhazi ha n'ime listi ọkpụkpọ, na ịmebe ụgbọala na-adọkpụ maka ọwa YouTube gị. Nwere ike ịgbanye pọtụfoliyo ọdịnaya vidiyo gị na YouTube site na ịmepụta vidiyo dị iche iche iji zụọ ahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike bulite blọọgụ Ahụmịhe Ahụmịhe Ndị Ahịa maka vidiyo ọ bụla na-akọwa vidiyo ị mepụtara maka ọwa gị.
Ahịa ndị na-emetụta ndị mmadụ na-edebanye aha ugbu a dị elu. Nwere ike ijikọ mmekọrịta gị na ndị YouTubers a ma ama iji mepụta ọwa YouTube vidiyo gị ma ọ bụ nwee ndị nwere oke mmetụta ịkekọrịta vidiyo gị na mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ. Ihe dị na ịwa ọwa YouTube masịrị gị nke ọma bụ ịlele arụmọrụ nke ọdịnaya vidio gị n'oge ọ bụla ma gbanwee mgbanwe ịchọrọ iji melite ya na oge. Ọtụtụ ngwaọrụ, dị ka Canva na Channelview, dị na ntanetị, nke nwere ike inyere aka ma melite mbọ ahịa gị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ị bulite ahịa vidiyo gị na YT, ị nwere ike ịtụle iji ha n'ọrụ.
Na mkpokọta, ịre ahịa YouTube dị ka ihe na-enweghị isi mgbe ị bu n'uche ịbanye n'ime ụwa nke vidiyo vidiyo. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ nnabata vidiyo na ọrụ ịkekọrịta na-enye n'efu n'ịntanetị dị ka Vimeo na DailyMotion, ọ nweghị onye nwere ike ịlụ ọgụ na nbibi na ojiji nke YouTube nyere. YouTube na-enye nnabata vidiyo vidiyo zuru ụwa ọnụ ma na -ekesa websaịtị site na ntanetị dị mfe, na-enweghị isi nke ọbụlagodi ndị mbido nwere ike iji bulite ọdịnaya vidiyo ha. Taa, YouTube bụkwa otu n'ime weebụsaịtị ndị a kacha eji na mgbasa ozi dijitalụ niile. Ga-eme nke ọma site n'iji ikike ya mee ka ndị na-ege gị ntị mara maka akara gị.
Anyị enyochaala usoro niile ị ga - agbaso iji zụlite usoro ịre ahịa YouTube maka azụmaahịa gị. Ọ bụrụ n ’ị chere na ị ga-erite uru site na enyemaka agbakwunyere iji guzobe ọwa ahịa azụmaahịa YouTube, ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị. Nweta echiche YouTube n'efu ma kwalite azụmaahịa vidiyo vidiyo gị n'ụzọ kachasị mma. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka ndị na-ege gị ntị na-ele anya na ọdịnaya nke ọwa YouTube mepụtara gị, ịnwere ike ịdabere na ahụmịhe na nka anyị iji nyere aka. Zụlite ndị na-ege gị YouTube na ndị ahịa gị n’otu ume!
You nwere ajụjụ gbasara GoViral? Lee ndepụta dị n’okpuru maka ajụjụ anyị na-ajụkarị. Ọ bụrụ na edeghị ajụjụ gị ebe a, biko kpọtụrụ anyị.
Kedu ka m ga - esi malite?
Nanị aha, mgbe ahụ, banye ma gaa na ngalaba “Nweta Ego” ka ịmalite ikiri vidiyo. Vidiyo ọ bụla ị na -ele, na -amasị, na -ekwu ma denye aha na ya ga -ewetara gị mkpụrụ ego.
Ozugbo ị nwere mkpụrụ ego ị ga -emefu, mbubata vidiyo gị na ngalaba "Vidiyo m" wee họrọ ọnụọgụ ndị debanyere aha, echiche, ihe na -amasị na nkọwa ị chọrọ ịnata na vidiyo ọ bụla.
Nyefee iwu gị wee nọdụ ala mgbe netwọkụ anyị na-anapụta ihe niile!
Gaa n'ihu na -enweta mkpụrụ ego n'efu ka ị nwee ike nyekwuo ọrụ na vidiyo gị, ma ọ bụ gaa "Zụrụ mkpụrụ ego" ịzụta ha kama.
Program nwere mmegharị Ozi Ntuziaka?
Ee, anyị nwere! Nanị banye wee gaa “Kpọọ & Nweta Karịa” ka ịchọta URL ntụnye pụrụ iche gị.
Onye ọ bụla ị na-ezo aka na netwọkụ anyị na-edebanye aha na akaụntụ wee nweta mkpụrụ ego ga-ewetara gị ọrụ 10%.
Nke a pụtara, ọ bụrụ na ị na-ezo aka na mmadụ 10 onye ọ bụla na-enweta mkpụrụ ego 1,000 (mkpụrụ ego 10,000), a ga-akwụghachi gị ụgwọ na 10% nke nke ahụ, nke bụ mkpụrụ ego 1,000.
Gwa ndị ọrụ GoViral bụ ụzọ kachasị mfe ma dị mfe maka gị iji nweta ego na-akpaghị aka site na mbọ ndị na-ezigara gị.
Usoro kachasị mma iji zoo ndị ọrụ na URL gị pụrụ iche gụnyere:
1. Zipu vidiyo vidio banyere GoViral.
2. Email / ezipụ ndị enyi gị na ndị ọrụ ibe gị nwekwara ọwa YouTube.
3. Dee ederede blọọgụ banyere GoViral na webụsaịtị gị.
4. Ekekọrịta gị pụrụ iche Ntuziaka URL on Facebook, Twitter na ndị ọzọ na-elekọta mmadụ nyiwe.
5. Okwu ọnụ.
6. Nwepụta ihe! E nwere ụzọ dị iche iche ị nwere ike isi zoo aka na GoViral!
Kedu otu ngwa ngwa ị na-eweta ọrụ ndị ahụ?
Ọrụ niile nke netwọkụ anyị na-eweta kpamkpam mejupụtara site na obodo nke ndị ọrụ GoViral edenyere aha ha mejupụtara omume iji nweta mkpụrụ ego. Nke a pụtara na ọsọ ọsọ nke ọrụ ọ bụla dịgasị iche dabere na okporo ụzọ anyị na-enweta, yana iwu ndị dị na netwọkụ anyị n'oge ọ bụla. Mgbe ụfọdụ a na-anapụta ha ngwa ngwa ma oge ụfọdụ a na-anapụta ha nwayọ nwayọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnyefe iwu gị ọsọ ọsọ, ikwesịrị banye wee gaa na ibe “Ndị otu”, ebe ị nwere ike kwalite na atụmatụ Gold ma ọ bụ Platinum maka ego wee nata “Mmekọrịta Ebu ụzọ”.
Atụmatụ Gold na Platinum ga-etinye vidiyo gị n'ihu ndị ọzọ iji nweta ọrụ gị ngwa ngwa!
Blog Posts kacha ọhụrụ
Otu esi ahọrọ ndabere egwu zuru oke maka vidiyo YouTube gị?
Mgbe ndị mmadụ na-eche maka vidiyo, ha na-echekarị maka ihe onyonyo. Agbanyeghị, eziokwu bụ na vidiyo abụghị naanị ihe onyonyo - ọdịyo na-arụ nnukwu ọrụ na…
Ihe kpatara 5 kpatara YouTube ji bụrụ akaụntụ Social Primary gị
Ruo afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ ndị na-ere ahịa agaghị eche na YouTube n'otu ụkwụ dị ka Facebook, Instagram, na Twitter. Agbanyeghị, enwere oge…
Kedu ka ị ga-esi kọwaa Onye Okike ọzọ maka mkpali ha maka vidiyo gị?
YouTube juputara na ndị na-emepụta ọdịnaya na-akpali akpali, ọ dịghịkwa njọ itinye ọdịnaya ndị ọzọ na vidiyo gị. Otú ọ dị, mgbe ị na-eme ya, ọ dị mkpa ka ị chepụta na ...
Ọrụ YouTube Ọrụ Twitter Ọrụ ikuku Pinterest Ọrụ Ọrụ na-arụ ọrụ Ọrụ SoundCloud
Echiche debanyere aha Comments amasị Oge awa Agbanye mbak
-eso ụzọ Nlele Ọwa
-eso ụzọ amasị
ejije Egwuregwu egwu egwu -eso ụzọ
ejije downloads -eso ụzọ amasị Comments Ntughari
Ji nganga na-eje ozi ọtụtụ puku ndị ọrụ YouTube
Lelee nyocha ndị ọrụ GoViral na ahụmịhe ha
by Codey Novak
Ise weebụsaịtị! Weebụsaịtị ahụ na-arụ ọrụ dị ukwuu ma usoro niile echekwara echedo. Ọ bụrụ n'ị na - achọ ọrụ nwere ike inye aka nweta Echiche YouTube, Mmasị, Ndị debanyere aha na Nkwupụta Na - akwụghị ụgwọ ị nọ n’ebe kwesịrị ekwesị. Nwere ike ịtụkwasị obi GoViral 100%
by Lilly-Rose Bolton
Nnukwu ekele! Nnukwu ọrụ! N'ihi GoViral m na-enwetakarị Echiche YouTube Na-akwụghị Ọgwụ. Ọ dị m ka ya bụrụ na m ga - ahụ GoViral na mbụ, ọ ga - eme ka ndụ m dịrị m mfe.
AKWERKWỌ AKWOURKWỌ anọ
by AKWERKWỌ AKWOURKWỌ anọ
Naanị ị hụrụ ebe nrụọrụ weebụ a n'anya ma na-always
Naanị ị hụrụ weebụsaịtị a n'anya ma ị ga - enweta ndị debanyere aha na mmasị na echiche biko bido iji webụsaịtị a ị ga - ahụ weebụsaịtị ahụ n'anya.
Ihe ị na-eche?
Jikọọ na netwọk anyị na-akwụghị ụgwọ ma malite ịnweta echiche, mmasị, ndị debanyere aha na nkwupụta taa!
aha Ugbu a
Nweta echiche YouTube n'efu, ndị debanyere aha YouTube n'efu, ihe YouTube na-ekwu na n'efu YouTube na-enwe mmasị iji netwọkụ anyị dị mfe & dị irè.
Uru nke Ime Trailer maka ọwa YouTube gị
Ndụmọdụ iji gbochie enweghị mmasị na vidiyo YouTube gị